RASMI: Daafaca Victor Lindelof oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Manchester United – Gool FM
RASMI: Daafaca Victor Lindelof oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Manchester United
Haaruun September 18, 2019
(Manchester) 18 Sebt 2019. Daafaca kooxda kubadda cagta Manchester United ee Victor Lindelof ayaa saxiixay heshiis cusub oo ku eg illaa xagaaga 2024-ka, isagoo dooq u haysta inuu sanad kale ku darsan karo.
Xiddiga xulka qaranka Sweden oo 25 sano jir ah ayaa 74 kulan u saftay kooxda Man United tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga Benfica oo ay kaga soo qaateen 31 milyan oo gini bishii June ee sanadkii 2017-kii.
Lindelof ayaa ku soo bilowday safka hore kulan waliba oo ay Man United ciyaartay illaa iyo hadda xilli ciyaareedkan, waxaana uu ka garab ciyaarayay daafaca ugu qaalisan adduunka ee Harry Maguire kaasoo xagaagii ay United kula soo saxiixatay 80 milyan oo gini.
Lindelof ayaa markii uu heshiiskan cusub qalinka ku duugay waxa uu yiri: “Tan iyo maalintii aan imid United waxaan dareemayaa sida inaan joogo Gurigeyga”
“Waxaan si weyn ugu koray labadaba ciyaaryahan ahaan iyo shaqsi ahaan labadii sano ee la soo dhaafay.”
Waa ciyaaryahankii labaad ee mustaqbalkiisa u hibeeya Manchester United isbuucaan kaddib markii uu qandaraas waqti dheer uu Isniintii u saxiixay kooxda Goolhaye David de Gea.
Arsenal oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha ay u la safreyso Jarmalka ka hor kulankeeda habeen dambe ee Europa League xilli Mesut Ozil laga tagay